China Electric Hydraulic Material Handler WZYD55-8C ndị na-emepụta na ndị na-ebubata ya |Bonny
6. WZYD55-8C kwesịrị ekwesị maka nbudata na nbudata, nchịkọta, transshipment na nkwakọ ngwaahịa nke ahịhịa nchara, ogige wharf, ogige ụgbọ oloko, ọgwụgwọ mkpofu na ụlọ ọrụ ọkụ.
7. Motors nke WZYD55-8C bụ ndị a maara nke ọma ika na China, ndị Motors nwekwara ike họrọ dị ka ndị ahịa chọrọ na mpaghara ike nkọwa.WZYD55-8C nwere akụrụngwa hydraulic ika ama ama n'ụwa na akụkụ.
8. WZYD55-8C nwere ọrụ dị iche iche nke nhọrọ, nke nwere ike izute onye ahịa nke ọma.Gụnyere: eriri igwe, ụgbọ elu na-ebuli elu, ụgbọ ala kwụ ọtọ, usoro onyunyo vidiyo / ihe ngosi, sistemu igwe eletrọnịkị, sistemu nchọpụta radieshon, sistemu mmanu mmanu akpaka, egwu rọba, wdg.
WZYD55-8C bụ ihe na-eji ọkụ eletrik 53-ton nke BONNY.Onye na-ahụ maka ihe BONY bụ ngwa ọrụ pụrụ iche dị elu maka nbudata na nbudata.Emebere ya nke ọma maka ọnọdụ nbudata na ibutu.tumadi na-agụnye: njikarịcha nhazi nke ngwaọrụ na-arụ ọrụ na igwe dum, njikarịcha nke usoro hydraulic, njikarịcha nke undercarriage na nguzozi, wdg, ọ bụghị mgbanwe dị mfe nke ndị na-egwupụta ihe.
Ibu igwe t 53
Enyere ike kW 160 (380V/50Hz)
Ọsọ rpm 1485
Oke.eruba L/min 2 × 267
Ọsọ ọsọ rpm 7.4
Ọsọ njem km/h 2.7 / 4.9
Oge ịgba ígwè ọrụ s 21
Ogologo ọganihu mm 9000
Ogologo osisi mm 6800
Oke.ijide iru mm 16844
Oke.ijide elu mm 14032
Oke.njide omimi mm 8188
1.What bụ ihe dị iche n'etiti WZYD55-8C na WZYD50-8C?
N'ezie, ndị a ụdị abụọ yiri nnọọ, ma WZYD55-8C nwere ibu ọrụ nso na a kwekọrọ ekwekọ ibu na ọzọ kwụsiri ike n'okpuru ụgbọ ala.
2.Can I nwere ike ịgbanwe ochie m na-eji mmanụ dizel na-eji ọkụ eletrik?
O doro anya na ọ ga-ekwe omume, ma ọ bụrụ na ị gụnyere ịzụrụ ngwa na ọnụ ahịa ndị ọrụ dị iche iche, ọ nwere ike ịbụ ụzọ kachasị mma ịzụta onye na-ahụ maka ọkụ eletrik ọhụrụ, nke dị oke ọnụ ahịa.
3.Ị nwere ike ịnye onye na-ahụ maka ihe na-arụ ọrụ nke ukwuu?
WZYD55-8C bụ onye na-ahụ maka ihe kacha arụ ọrụ na ngwaahịa ọkọlọtọ.Ọ bụrụ na ịchọrọ oke ọrụ ka ukwuu, anyị kwesịrị ịhazi ngwaahịa ahụ.Biko kpọtụrụ anyị iji chọpụta mkpa gị.
4.Ị nwere ụlọ ọrụ mpaghara ma ọ bụ ụlọ ọrụ?Kedu ihe m ga-eme ma ọ bụrụ na enwere nsogbu na onye na-ahụ maka ihe?
N'ụzọ dị mwute, anyị enwebeghị ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ mpaghara ọ bụla.Ọ bụrụ na enwere nsogbu na onye na-ahụ maka ihe, biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụ onye ọrụ mpaghara ozugbo, anyị ga-enyere gị aka dozie nsogbu ahụ n'ụzọ kachasị ngwa ngwa.
5.Ònye ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị nwere ike ịnọgide na-enwe ngwaahịa ndị dị otú ahụ?
Ụlọ ọrụ na-edozi ngwaahịa igwe injinia tozuru oke dị mma.
Nke gara aga: Onye na-ahụ maka ihe eji eme ihe igwe eletriki eletrik WZYD50-8C
Osote: Onye na-ahụ maka ihe eji eme ihe na-anọpụ iche hydraulic WZD22-8C